Mpanamboatra sy mpamatsy milina fametahana vato - Orinasa manapaka vato vato any Shina
Masinina manapaka tetezana
Ity milina ity dia mandray ny rafitra fanaraha-maso microcomputer sy ny interface misy ny masinin'olombelona, ​​ampiarahana amin'ny encoder rotary avo lenta avo lenta mba hitadiavana sy fitaovana infrared, mampiasa inverter hifehezana ny famahanana ankavanana ankavanana, manitsy ny hafainganam-pandeha arakaraka ny fitaovana vato. Izy io dia mampiasa rafitra fananganana hydraulic, combinat ...
Milina manapaka tetezana
Ity milina ity dia mandray ny rafitra fanaraha-maso microcomputer sy ny interface misy ny masinin'olombelona, ​​ampiarahana amin'ny encoder rotary avo lenta avo lenta mba hitadiavana sy fitaovana infrared, mampiasa inverter hifehezana ny famahanana ankavanana ankavanana, manitsy ny hafainganam-pandeha arakaraka ny fitaovana vato. Izy io dia mampiasa rafitra fananganana hydraulic, avo lenta ...
Masinina fanapahana tetezana afovoany
Ity milina ity dia mandray rafitra fanaraha-maso microcomputer sy interface misy ny masinin'olombelona, ​​mampiasa inverter hifehezana ny famahanana ankavanana ankavanana, manitsy ny hafainganana arakaraka ny fitaovana vato. Izy io dia mampiasa rafitra fananganana hydraulic, fitambaran-tsipika misy plastika chrome ary mitafy kirihitra, miaraka amin'ny banga kely, azo anaovana, b ...
Masinina fanapahana tanana
Ity milina ity dia mampiasa rafitra mitambatra; ny loha lehibe dia afaka mihodina 180 degre ary mihetsika ambony sy ambany ny herinaratra. Ny masinina manontolo dia manana firafitra mifangaro, fisehoana tsara, asany miorina ary fametrahana mazava tsara, izay mifanaraka amin'ny fanapahana sisin-tany sy ny fikosoham-baravarankely kely, ny lalotra ary ny taila matevina.